China Stator okpomọkụ mmetụta Manufacturer - Ogo Stator okpomọkụ ihe nkwupụta - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Ike ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta > Stator okpomọkụ ihe mmetụta
Winding stator okpomọkụ ihe mmetụta (TW2010Pt100-100-2-3104 / 00F200 / X2) nwere obere okpomọkụ ịrị elu na a pụrụ ịdabere na okpomọkụ mmesho.
Stator RTD stator okpomọkụ
The agbakwunyere kwes eguzogide eji na moto na-emekarị iji tụọ stator okpomọkụ nke nnukwu, ọkara na obere moto (generator, moto).
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Stator okpomọkụ ihe mmetụta na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Stator okpomọkụ ihe mmetụta dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.